Moa ve takatsika ny fotoana toetra ny Isiraely? | Apg29
Moa ve takatsika ny fotoana toetra ny Isiraely?
Israely tafaverina amin'ny maha-firenena sy ny Jiosy nanangona niverina ho any amin'ny tany.
Ankehitriny dia tsy mila miandry ny Jiosy dia hiverina ho any amin'ny tany, dia tonga zava-misy 70 taona lasa izay.
Moa ve isika mahafantatra ny dikan'izany?
Raha tsy mahatakatra izany, dia midika izany fa isika dia holavin'ny eo ny hevitry ny ny teny faminaniana. Mety ho toa goavana, nefa afaka nilaza tena ho toy izany.
Noho izany eto izahay hoe. Ary izao nitranga 70 taona farany dia mba naminany mazava tsara fa ireo izay mamaky ny faminaniana ara-baiboly efa tonga saina mialoha fa hitranga izany.
Eto dia ohatra vitsivitsy ihany no manome ny Kristianina mitory azy ao amin'ny vanim-potoana ny fotoana dia nahita ny teny faminaniana.
Ao amin'ny 1600s, dia velona John Owens, izay Anglisy mpitarika fiangonana sy ny teolojianina. Nisy tamin'izany andro izany tsy nisy tsirim-panantenana fa ny Jiosy afaka miverina any ny fireneny. Na dia teo aza izany mialoha John Owens izao manaraka izao:
"Ny Jiosy dia tsy maintsy hangonina avy any amin'ny faritra rehetra amin'ny tany izay nampielezana, ka namerina tany an-tanindrazany."
Ny mpanoratra protestanta Paul Glegenhauver nanoratra ity tamin'ny 1655: "Ny fiverenan'ny maharitra ny Jiosy ho any amin'ny taniny dia mandrakizay nanendrena azy ireo avy amin'Andriamanitra ny alalan 'ny tsy voafetra fampanantenana tamin'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba."
Dia haka ohatra avy any amin'ny zato taona. Aogositra Hedstrom nanome tamin'ny 1912 dia namoaka ny boky Fianarana ny faminaniana.
Tamin'izany no nanoratra hoe: "Farany, jereonareo fa ny Fanjakana Tiorka UTI dia tamin'izany andro izany maimaim-poana ho fanjakana mahaleo tena, izany hoe ny Jiosy State, na inona izany dia hatao hoe."
Ny minisitra Danoà C. Skovgaard-Petersen no nanoratra ny boky Famantarana sy ny fotoana, dia nivoaka 1919th
Ato amin'ity boky ity ny mpanoratra manome fitenenana ny anatrehan'i izy rehefa hiverina, toy izany koa ny Jiosy hiverina ho ao amin'ny fireneny. Hoy izy io:
"Fa Na ahoana na ahoana dia tsy maintsy heverina ho toy ny fahamarinana ara-baiboly, ny Isiraely dia voangona ao amin'ny fireneny, ary ao vårbrytning ara-panahy tonga eo anatrehan'i Jehovah. Ny tarehin-tsoratra dia tsy tanteraka, ny Jiosy dia tsy mbola tonga tao an zara-tany momba Palestina. "
Nanoratra koa Skovgaard-Petersen: "Koa afaka manantena isika fa ny Jiosy dia tsy maintsy ho talohan'ny fiverenan'i 'i Jesoa Kristy, ary miverina amin'ny tany."
Inona no ho avy izao na izany aza dia akaiky kokoa fa i Jesoa na oviana na oviana dia afaka hiverina, satria ny fototra fepetra faminaniana efa tanteraka izany. Moa ve tsapantsika izany ary itondray ny vokatry ny azy?
V 04, måndag 25 januari 2021 kl 18:02